चकलेट, क्रीम र बदामको कप | बेजिया
मारिया vazquez | 08/06/2021 10:00 | Postres
यदि मैले तपाईंलाई भन्यो कि तपाईं यो मिठाई १० मिनेटमा बनाउन सक्नुहुन्छ, के तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ? यो कप चकलेट, क्रीम र बदाम एक हो महान विकल्प जब हामी घरमा घरमा पाहुनाहरु छन्। हामी बनेको चकलेट बेस छोड्न सक्दछौं र बाँकी सामग्रीहरू सेवा गर्नु अघि थप्न सक्दछौं।
यी चश्माहरू तयार गर्न तपाईंलाई कति लागत लाग्छ? लगभग १० मिनेट। त्यसो भए, तपाईंले तिनीहरूलाई कोठाको तापक्रममा चिसो दिन दिनु पर्छ वा फ्रिजमा राख्नुहोस् यदि तपाइँ उही दिन तिनीहरूलाई खान छैन। चकलेट मूस यो धेरै नरम हो र एक्लै सर्न सकिन्छ, तर क्रीम र बदामले यस मिठाईलाई अधिक गोलो बनाउन योगदान गर्दछ।
यस मिठाईमा बदाम थप्ने बारेमा रोचक कुरा हो नुन विपरीत कि यी मिठाई योगदान। र भुटेको बदामको मामलामा क्रन्ची टच जुन शीर्षको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तर यदि बदाम तपाईंको चीज होइन भने, क्रीमको शीर्षमा चकलेट, कोको वा दालचिनीको केही श्याभिंग थप्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
1 १ गिलासका लागि सामग्रीहरू
१ गिलासका लागि सामग्रीहरू
२०० मिलीलिटर दूध वा बदाम पेय
G० g कर्नस्टार्च
१ चम्मच चिनी
पहिलो कचौरा एक कचौरामा राख्नुहोस्: बदाम पेय, कर्नस्टार्च, चिनी र कोको। त्यसो भए, केहि म्यानुअल डण्डको साथ मिक्स गर्नुहोस् सबै सामग्रीहरू राम्रोसँग संयोजन नभएसम्म
कचौरालाई माइक्रोवेभमा लैजानुहोस् र अधिकतम पावरमा एक मिनेटको लागि तताउँछ। त्यसपछि हटाउनुहोस् र रिडहरूसँग फेर्नुहोस् यसलाई फेरि माइक्रोवेभमा राख्नु अघि। मिश्रण गाढा नभएसम्म seconds० सेकेन्डको स्ट्रोकको साथ अब अपरेशनलाई कति पटक दोहोर्याउनुहोस्। मेरो मामला मा यो कुल मा 30 मिनेट थियो।
एक पटक म मोटो भयो गिलासमा मिश्रण खन्याउनुहोस् र कोठाको तापक्रममा चिसो हुन दिनुहोस्।
जब कोकाआ मउसे चिसो हुन्छ, कोरिएको क्रीमको साथ सजावट, बदाम बटर, दालचीनी र भुने बदामका केही थ्रेडहरू।
मिठाईको लागि ग्लास चकलेट, क्रीम र बदामको मजा लिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » Postres » चकलेट, क्रीम र बदामको कप